Shina Fampiasana ny fanamboarana vy ary famokarana vy | Daren
Antsoy izahay: 0086-18814968885
Famatorana kofehy vy-kofehy vy
Tady vita amin'ny vy tsy voafatotra kofehy vy
Tady vita amin'ny kofehy vy tsy misy fangarony
Famatorana kofehy vy tsy misy fangarony-kofehy mifono vy-polyester mifamatotra
Tady vy mifatotra-Ball-Lock PVC mifono kofehy
Famatorana fantsom-by vy tsy misy vy
Tady kofehy vy tsy voafatotra kofehy vy
Tady vy mifatotra-Ball-Lock Polyester mifatotra kofehy
Tady vita amin'ny vy tsy voafatotra vy mifatotra vy
Famatorana tariby vy tsy misy fangarony
Famatorana tariby vita amin'ny vy tsy misy fangarony
Tady fantsom-by tsy misy fangarony vy mifamatotra tanteraka amin'ny fatorana mifangaro polyester
Tady vita amin'ny vy tsy misy fangarony vy mifamatotra feno polyester mifamatotra mifamatotra
Teeth Type Buckles fatorana
Volon'ondry karazam-bolo vita amin'ny volom-bolo
Volon'ondry volom-borona vita amin'ny volony
Tady kofehy vy tsy misy fangarony
Karazana vy tsy misy fangarony
Stainless Steel Polyester Bands-Pole karazana
Tady vita amin'ny vy tsy misy fangarony
Famatorana tariby vy tsy misy fangarony-Fahazoana mifamatotra feno polyester
Tady vita amin'ny vy tsy misy fangarony vita amin'ny vy
Famatorana tariby LS Buckle vy tsy misy fangarony
Tady vy tsy misy fangarony Dl Famatorana-azo aorina
Famatorana tariby vy / kofehy tsotra
SM Tags vy tariby
Marker tariby mora vakiana
SS andian-tariby tsy voafefy tarika SS-andian-dahatsoratra
SSP polyester steeel polyester / Epoxy mifono andiana tarika-SSP
SSB tsy misy fangarony vy PVC mifono tarika-SSB andian-dahatsoratra
Vokatra milina tsy misy vy
Masinina C001 prdouct
Masinina C001-1 prdouct
Masinina LQA prdouct
LQA-1 milina prdouct
Masinina CT02 prdouct
Masinina CT02-1 prdouct
Masinina CT02-2 prdouct
Masinina CT02-3 prdouct
HT-338 milina prdouct
Masinina G402 prdouct
J020 milina prdouct
Milina C075 prdouct
Fametahana sy ny kojakoja misy azy
Clamp vy tsy misy vy
KZ Stainless vy clamp
KL Stainless vy clamp
Fampiasana vy mametaka vy
Izy io dia manana fampiharana marobe amin'ny rafitra herinaratra sy herinaratra. Ny tombony azo dia aseho amin'ny:
1. Ny vokatra vita amin'ny tariby vy dia tsy voafehin'ny endrika sy ny haben'ny zavatra hamatotra azy;
2. Ny firafitry ny buckle tsotra dia manamora ny fahasarotan'ny peratra nentim-paharazana;
3. Ny fahombiazan'ny fifamatorana tsara dia miantoka ny fiarovana ireo zavatra mifatotra;
4. Ny fatorana amin'ny tariby tsy misy fangarony dia fitaovana fanoherana ny lozisialy sy hafanana avo lenta mba hahazoana antoka ny tontolo tsara tarehy sy ny fiarovana ny afo;
Fampiharana ny fatorana tariby vy amin'ny indostrian'ny fiara:
1. Takelaka fanamafisam-peo ho an'ny fantsom-panafody fiara. Ny fampiasana fatorana tariby fa tsy ny fomba fanao mahazatra dia manalavitra ny fisehoan'ny fihenjanana manapaka ny fantsom-by noho ny fanitarana hafanana. Ampitomboy ny fiainan'ny tabilao insulate heat ary manatsara ny fahamendrehana. Ny fomba fametrahana tsotra dia mampihena ny vidin'ny fantsom-panafody.
2. Rakotra vovoka ho an'ny vatan'ny fiara. Ny vokatra vita amin'ny tariby vy dia manana tombony amin'ny tsy fetran'ny habeny, izay mampihena ny tahiry namboarina noho ny habeny samihafa ho an'ny indostria mamokatra hazo fisaka. Ny firafitra tsotra sy tanjaka avo azo antoka dia manome fahombiazana tsara ho an'ny fonon'ny vovoka amin'ny vatan'ny fiara.
3. Fiara fitateram-bahoaka. Ny vokatra vita amin'ny tariby tsy misy fangarony dia miantoka ny fahamendrehan'ny fiara fitateram-bahoaka miaraka amin'ny fatorana tariby vy mifono vy tsy manam-paharoa. Mandritra izany fotoana izany dia voaro amin'ny fahasimbana ny velaran'ny bara.
4. airbag. Amin'ny fanamboarana airbags fiara dia azo antoka ny fahombiazan'ny airbag.
5. Ampiasaina amin'ny fantsom-pifandraisana sy fivoahan'ny rano amin'ny fiara sy ny fantsom-panafody, ny fantsom-pifandraisana vy dia manome antoka ny famehezana, ny fiarovana ary ny fahatokisana ny fantsona miaraka amin'ny tery tsara.
Ny fahambonian'ny vokatra vita amin'ny tariby tsy misy fangarony amin'ny famantarana kaontinaly sy famantarana:
1. Tsy ferana amin'ny endrika ivelany sy ny haben'ny zavatra hapetaka;
2. Ny fahombiazan'ny fifamatorana tsara dia miantoka ny fitoniana sy ny fiarovana ny famantarana;
3. Ny firafitra tsotra sy ny fatorana matanjaka be dia mampihena ny vidin'ny fitantananana monisipaly;
4. Ny fisafidianana ireo fitaovana vita amin'ny vy tsy manja dia manatsara ny tontolo iainana sy ny fitantanan-draharaha monisipaly;
Ny fatorana tariby vy dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny indostria. Ny tariby indostrialy, ny fantsom-pitrandrahana indostrialy, ny fambara indostrialy, ny tilikambo rano amin'ny indostrialy ary ny lafiny maro hafa dia manana fahombiazana tsara.
1. Ny vokatra vita amin'ny kofehy vy dia manome vokatra 304SS, 201SS, 316SS, 317L, Monel ary fitaovana hafa hiantohana ny fitakiana manokana ny indostria ho fanoherana ny harafesiana sy ny afo;
2. Ny zava-bita mihombo mafy dia miantoka ny fiarovana ny famokarana indostrialy;
3. Ny fomba fametrahana tsotra dia manome fahafaha-manao amin'ny fametrahana indostrialy, manatsara ny fahombiazan'ny asa ary manome Fiarovana ho an'ny fikirakirana maika.
4. Ny fatorana tariby vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny afon-afo sy manohitra ny harafesina dia miantoka ny fiarovana ireo tariby indostrialy. Nandray anjara tamin'ny
Fanentanana ny famokarana azo antoka sy fiarovana ny tontolo iainana
Ny vokatra fantsom-pifandraisana vy dia mampiseho tombony lehibe amin'ny indostrian'ny fantsona.
1. Afaka mamehy fantsona misy savaivony;
2. Ny famolavolana buckle tokana dia misy famehezana tsara amin'ny toeran'ny buckle, miantoka ny fifandanjan'ny adin-tsaina amin'ny loopika rehetra amin'ny fatorana;
3. Ny haben'ny fametahana fantsona efa vita mialoha dia manatsara ny fahombiazan'ny fametrahana fantsona;
4. Ahena ny fitanana ny fametahana fantsona, ny fantsom-paompy efa vita prefabrika dia afaka manangona fantsona kely kokoa noho ny habeny;
5. Ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra avo lenta sy fitaovana pneumatika ary ny famolavolana fihenjanana azo ovaina azo antoka ny fihenjanana sy ny fitoniana amin'ny fametrahana.
Izy io dia be mpampiasa amin'ny fifamatorana tariby fifandraisana an-trano sy tariby fifandraisana ivelany.
1. Ny fatorana tariby tsy misy fangarony dia miantoka ny fiarovana ny tariby fifandraisana miaraka amin'ny fahatereny tsara;
2. Ny fatorana tariby vy tsy manam-paharoa dia mitazona ny habaka ho an'ny fanitarana hafanana an'ny tariby, izay miantoka ny fahamendrehana azo itokisana ary miaraka amin'izay dia miantoka fa tsy voaporitra ny velarana;
3. Ny endrika tsy manam-paharoa sy manana patanty ambonin'ny fireproof famolavolana manome antoka ny fireproof sy ny fiarovana fampisehoana tariby.
Ho an'ny fepetra manokana amin'ny sehatry ny fiaramanidina, ny fatorana tariby vy dia manana fahombiazana miavaka.
1. Ny fatorana tariby vita amin'ny vy tsy azo ianteherana no miantoka ny fiarovana ny tariby fiaramanidina amin'ny tontolo masiaka;
2. Ny fisafidianana fitaovana tsy mandeha amin'ny afo dia mahafeno ny fepetra takian'ny indostrian'ny fiaramanidina;
3. Ny famolavolana fiarovana manokana tariby misy patanty dia manome antoka ny velaran'ny tariby raha manome toky fa mifatotra ny tariby;
4. Ny fatorana tariby vy dia milalao tombony lehibe amin'ny fantsom-panafody solika fiaramanidina sy ny fantsom-panafody.
Fotoana fandefasana: Oktobra-10-2020
Ampio: SuAo Industrial Zone, Liushi Town,
Tanàna Wenzhou, Faritanin'i Zhejiang, Sina.